Ntak emi Họrọ Anyị - Jiangyin Unite Top Heavy Industry Co., Ltd.
7 OZI TOH USA US
Anyị nwere ogo dị elu, arụmọrụ dị elu, ike R & D nke ndị ọrụ aka ọrụ. Companylọ ọrụ ahụ nwere ọkpụkpụ azụ ace ace, usoro hydraulic na-eme ka ahụmịhe karịa afọ 25, na-enye ndị ahịa igwe na-emezigharị ihe zuru oke na ngwọta.
8 na-esetịpụta usoro mmepụta nke mgbake maka ndị ahịa ụlọ na ndị mba ọzọ iji nye nsogbu ndị ọkachamara na metal na-abụghị nke igwe. nke kwesịrị maka isi ígwè mills na imegharị ihe maka iji ụlọ ọrụ .Ferrous metal gbazee ụlọ ọrụ.
All ígwè efere eji na akụrụngwa na-mere nke Q235, 45 #, 16Mn, 65Mn na ndị ọzọ dị iche iche nkọwapụta si ama anụ ụlọ ígwè emeputa. Udia ulo eyi efere na-mere nke NM500 na-ekwe nkwa kasị mma na a ogologo ọrụ ndụ.
Anyị ga-emepụta ụfọdụ ụdị dị ọkụ nke igwe tupu oge eruo, nke ga-ebelata oge nnyefe.
Anyị nwere usoro mmepụta 10 na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Onye isi otu nke usoro mmepụta nke ọ bụla bụ maka ọrụ dum nke igwe n'ichepụta. o nwere ihe karịrị 150 tent nke nnukwu CNC ala ụdị na-agwụ ike na igwe igwe, NC lathe, igwe mpempe akwụkwọ NC, ụlọ ọrụ CNC na oghere miri emi na igwe na-agwụ ike, a na-achịkwa àgwà nke njikọ ọ bụla.
Tupu igwe ahụ ahapụ ụlọ ọrụ ahụ, onye pụrụ iche ga-ahụ maka ịnye igwe ahụ ma nye ọrụ nyocha vidiyo. Nye ọrụ nlebara anya na ntanetị na ntanetị na ntanetị, ntinye aka n'ọnụ ụzọ na mgbe a na-erezi ahịa gburugburu ụwa.
Mkpokọta ahịa nke Unite Top brand hydraulic equipment na-ejide nchekwa dị mma na ụlọ ọrụ na China. A na-ere ngwaahịa ndị a karịa mba 30 na mpaghara dị na European, Asia na America.
Metal Powder Briquette Machine, Hydraulic Baler / Aluminium Nwere Ike Press Machine, Mpempe akwụkwọ Metal Baler, Agụba Shear Maka Mobile Digger, Kwụ Baler Aluminium Scrap Press Machine, Ọla kọpa Scrap Baler,